CHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara- TPU Film Extrusion Line CHINAPLAS2019 Tsara - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
CHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara- TPU Film Extrusion Line CHINAPLAS2019 Tena tsara
1,Fitaovana fanalefahana sy fanamainana mandroso no natao hiantohana ny kalitao milamina, tsy hisy bubble amin'ny plastika izay manampy ny mangarahara amin'ny vokatra farany. Fiara tsy mihetsika roa no omena ho an'ny dingana iray izay manatsara ny fiasan'ny milina ary mampihena ny vidin'ny famokarana.
2,Miorina amin'ny akora vita amin'ny mpanjifa, Jwell dia mampiasa tanteraka ny famokarana volo maharitra sy ny traikefa fanandramana, mamolavola volo 50 65 75 90 105 110 130 izahay miaraka amin'ny LD 30 33 36 hivoaka ireo fitaovana TPU isan-karazany. Ny fampisehoana extrusion dia tena mahomby ary ny tsindry azo antoka. Ny visy nitriding sy plating dia manana fotoana lava sy plastika tsara, izay manampy amin'ny fanesorana ny mason'ny trondro.
3,TPU T-die vita amin'ny orinasa Jwell dia mandray vy vita amin'ny lasitra marika Alemana. Ny henjana sy ny fiaretana fanerena dia mahatratra ny fenitra iraisam-pirenena. Ny cartridge hafanana namboarina dia manampy amin'ny fanaraha-maso tsara ny hafanan'ny bobongolo isaky ny faritra. Ny fikorianany extrusion dia mitovy ary mora ny manitsy sy miasa. Masinina tsara avy amin'ny CNC avy any Alemana, Korea, Japon ary novolavolaina tsara amin'ny fantsona anatiny T-die avy amina digital 3D simulate flow miasa miaraka amin'ny kalitao tsara.
4,Ny fomba fihenan'ny karazana roller-telo dia natsangana, ary ny ambonin'ny roller dia namboarina manokana ho an'ny TPU tamin'ny alàlan'ny fisorohana ny anti-adhesive layer, ny matte extinction, sns.
Ny atin'ny rojo telo dia alain'ny rano, ary ny endrika manokana an'ny mpihazakazaka dia manana fahasamihafana ambany amin'ny maripana eo ambonin'ny velaran'ny roller, izay miantoka ny fanamainana ny vokatra sy ny fandeferana tsy matevina. Rafitra fanaraha-maso tsy miankina mahaleo tena, izay afaka mifehy tsara ny mari-pana isaky ny roller, fanaraha-maso môtô japoney tsy miankina, manitsy malalaka ny hafainganana ary manampy ny fizotrany namboarina.
5,Fikarohana matihanina sy fampivoarana ny winder an'ny taranaka maro, fanovana maimaim-poana ny fihodinan'ny foibe sy ny fikorontanana, ny fitehirizana ny mpiasa, ny fitomboan'ny hafainganam-pandehan'ny tsipika, ny fihenjanana mifehy ny fizotran'ny fizotrany, ny fanarahana ny takian'ny mpanjifa samihafa.
Manana milina TPU maro ao amin'ny orinasan-tsika vonona ho entina izahay, tongasoa ireo mpanjifa manerantany hitsidika anay.
HIVERINACHINAPLAS2019 Fitaovana tena tsara - Andalana famolavolana modely PP Hollow Building Template roa
NEXTFitaovana - JWZ-BM30F / 160F / 230F Milina mitsivalana mitsoka lovia